I-MAGNIFICENT KASBAH ANDALUZ * pool terrace apartment *
Chiclana de la Frontera, Andalucía, i-Spain
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Isabel & Dominic
Yiba yizivakashi zethu ezinelungelo epharadesi lethu lase-Andalusia :-) Indlu yethu yezivakashi itholakala endaweni eluhlaza okotshani imizuzu eyi-10 ngemoto ukusuka emabhishi amakhulu e-Chiclana de la Frontera (Andalusia).
Ingadi yayo engu-1800m2 enechibi lokubhukuda nezihlalo zedekhi izokuvumela ukuthi uqabuleke futhi uphumule ngenxa yezindawo zayo ezinelanga nezinomthunzi. Indawo ilungele ukuhlola itheku laseCadiz namabhishi ayo amahle esihlabathi esimhlophe. Abanikazi abahlala esizeni.
Ifulethi lethu lezivakashi lisesitezi sokuqala seKasbah ngaphandle kwendlu yethu enkulu. Ivula ithala elikhulu okwabelwana ngalo futhi elinefenisha. Siyojabula ukukwamukela nokukwazi uma ufisa futhi sabelane nawe ngamakheli ethu angcono kakhulu. Siyakwamukela endlini yethu!
isiqandisi esiyi-refrigerateur congelateur
sitholakala endaweni yokuhlala enezakhiwo ezimbalwa nje lapho ungajabulela khona ukuthula nokuthula usuku lonke kanye nesibhakabhaka esigcwele izinkanyezi ebusuku lapho isimo sezulu sivuma.
Ibungazwe ngu-Isabel & Dominic
sizokujabulela ukwabelana nawe ngamakheli ethu angcono kakhulu olwandle kanye ne-chiringuito
UIsabel & Dominic Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: CTC-2019214787
Hlola ezinye izinketho ezise- Chiclana de la Frontera namaphethelo